Sun, Dec 8, 2019 at 1:38pm
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड समयमै सकिन्छ : मन्त्री नेम्वाङ #आहा खबर# शालिग्राम सङ्ग्रहालयले विश्वको ध्यान तान्छ : शेरबहादुर देउवा #आहा खबर# नेपाल साग फुटबलको फाइनलमा, बंगलादेश १-० ले पराजित #आहा खबर# साग महिला क्रिकेट : बङ्गलादेशलाई स्वर्ण पदक, श्रीलङ्का २ रनले स्तब्ध #आहा खबर# गौरिकाको नयाँ कीर्तिमान : सागको एउटै संस्करणमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली #आहा खबर# आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि कोहलपुर निषेधित क्षेत्र घोषित #आहा खबर# अबदेखि ठूलालाई पनि कानून लाग्छ : महान्यायाधिवक्ता खरेल #आहा खबर# बेलायती चुनावअघि दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, ब्रेक्जिट नै मुख्य मुद्दा #आहा खबर# साग : नेपालका २ खेलाडी जुडो खेलको फाइनलमा #आहा खबर# कोहलपुर तनावग्रस्त : ट्रकको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु, विद्यार्थीले ट्रक जलाइदिए, प्रशासनद्वारा कफ्र्यू आदेश #आहा खबर# नयाँ दिल्लीमा भिषण आगलागीः कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# नेपाल भ्रमण वर्ष : ५ हजार व्यक्तिलाई पर्यटकीय तालीम दिइने #आहा खबर# नेपालले बंग्लादेशसँग बराबर मात्र खेले पनि फाइनल पक्का #आहा खबर# नेकपा सचिवालय बैठक सोमबार बस्दै, कस्तो आउला तल्लो कमिटीबाट चुनावी समीक्षा ? #आहा खबर# ..त्यसपछी खुशीको सीमा रहेन #आहा खबर#
बुधबार, १५ श्रावन २०७६,	– जमुना वर्षा शर्मा.
चिप्लेढुङ्गा, १५ साउन ।
पोखरा महानगरपालिका सेवाग्राहीको चाप हुने महानगर हो । मङ्गलबार सेवा लिन महानगर पुगेका सेवाग्राही भने केही अचम्ममा परे । महानगरको मूल ढोकामा एक जापानी महिला मेकअपका सामानसहित चिटिक्क परेर बसेकी थिइन् । उनका वरिपरि अन्य सौन्दर्यकलाका विद्यार्थीहरु पनि थिए । बोर्डमा लेखिएको थियो ‘जापानको निःशुल्क मेकअप ।’
केही सेवाग्राही भने त्यो दृश्यले निकै अचम्म मानेर हेरिरहेका थिए । महानगर जस्तो व्यस्त ठाउँमा मेकअपको सामान फिजाएर निःशुल्क मेकअप गर्दै बस्नुको अर्थ धेरैले भेउ पाएनन् । काममा आउनेहरु केही बेरको दृश्य हेरेर फर्के भने केहीले निःशुल्क मेकअपमा सहभागी पनि जुटाए ।
साउनको महिना भएकाले अधिकांशले हातमा मेहन्दी लगाइरहेका थिए । “साउनको महिना आज कामले महानगर आएको मेकअप गर्ने कार्यक्रम रहेछ”, पोखरा–१७ बस्ने उमा सुवेदीले भन्नुभयो, “निःशुल्क मेहन्दी लगाइदिन्छौँ भन्नुभयो लगाएँ ।”
केही सेवाग्राहीले भने गुनासो गरिरहेका थिए । ‘महानगर जस्तो ठाउँमा यसरी मूल ढोकामा मेकअप गर्नुको औचित्य के हो ? यसले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ?’ महानगर मूल ढोकामा भएको यो गतिविधि राम्रो नलागेको एक पुरुष सेवाग्राहीले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
महानगरका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले भने जाइकामा कार्यरत जापानी सौन्दर्यकर्मीले सौन्दर्यकलाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पोखरा महानगरमा पनि ठाउँ मागेकाले उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । “खासै विशेष कार्यक्रम केही होइन, एक जापानी सौन्दयकर्मी युवतीले सामान्यतः मेकअप कसरी गर्ने र यसले महिलाको सौन्दर्य र आत्मविश्वासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर सिकाउनका लागि ठाउँ माग्नुभयो हामीले उपलब्ध गराएका हौँ ।” यसले महिलालाई मेकअपका बारेमा जानकारी दिन सहयोग पु¥याएको उहाँको भनाइ थियो ।
जाइकाबाट पोखरामा महानगरपालिकाको महिला शाखामा कार्यरत जापानी युवक योहासिमातोको सहयोगमा जापानी युवती महानगर परिसरमा आएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उनले पोखराको अन्य वडामा समेत निःशुल्क मेकअप गर्दै आइरहेकी छिन् ।
सौन्दर्यकलाको विद्यार्थी २२ वर्षीया युरिकाले एक महिनाको बसाइमा आफ्नो सीपलाई अरूसमक्ष पु¥याउने प्रयास गरेको बताइन् । “जापानी मेकअपका बारेमा नेपालमा जानकारी दिने उद्देश्य र नेपाली महिलामा मेकअपको महत्व र यसले महिलाको जीवनमा ल्याउने सकारात्मक कुराहरुका बारेमा जानकारी दिन निःशुल्क मेकअप गरेकी हूँ ।” यो आफ्नो रहर र पेशा दुवै भएको उनको भनाइ थियो ।
युरिका शिवायामासहित गुरुङ ब्युटी एकेडेमी न्युरोड पोखराका चार प्रशिक्षार्थीहरुले दिउँसो १ देखि ४ बजेसम्म सेवाग्राही महिलालाई मेकअप गराइदिएका थिए ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड समयमै सकिन्छ : मन्त्री नेम्वाङ